Idilesi yewebhusayithi yethu yile: https://info.africarxiv.org.
Umtya ongachazwanga owenziwe kwidilesi yakho ye-imeyile (ekwabizwa ngokuba yi-hash) unokunikezelwa kwinkonzo ye-Gravatar ukubona ukuba uyayisebenzisa. Umgaqo-nkqubo wabucala weenkonzo ze-Gravatar uyafumaneka apha: https://automattic.com/privacy/. Emva kokuvunywa kwezimvo zakho, umfanekiso wakho weprofayile ubonakala eluntwini kwimeko yoluvo lwakho.
Ukuba ushiya uluvo kwindawo yethu unokukhetha ukugcina igama lakho, idilesi ye-imeyile kunye newebhusayithi kwiikuki. Oku kwenzelwa ukuba kube lula kuwe ukuze ungazalisi iinkcukacha kwakhona xa ushiya olunye uluvo. Ezi cookies ziya kuhlala unyaka omnye.
Ukuba unayo i-akhawunti kwaye ungena kule sayithi, siza kuseka i-cookie yesikhashana ukujonga ukuba isiphequluli sakho samkela ikhukhi. Le cookie iqulethe idatha yomuntu kwaye ilahlwe xa uvalela isiphequluli sakho.